कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको खुद नाफा ७० करोडभन्दा माथि - Digital Khabar
कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको खुद नाफा ७० करोडभन्दा माथि
०३ साउन, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत वर्ष खुद नाफा ५ दशमलव ८५ गुणा बढी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चौथो त्रैमाससम्ममा रू. ११ करोड ९७ लाख १९ हजार खुद नाफा गरेको बैंकले यस वर्ष रू. ७० करोड २ लाख ४० हजार यो नाफा गरेको हो ।